Noocyada qiimaha jaranjarada ee iibiya qalabka wax iibiya
Qaybaha dabacsan ee isdaba-marinta, noocyada alaabada iibiya qalabka xiisaha leh
Gears & jeexjeexyada Qaybaha Isboortiga
Qaybaha Beddelashada Qalabka "Gearbox OEM".
Waxaan bixinaa cabirrada Gear & shaft iyo alaabada guryaha.
Waxaan bixinaa agab tayo sare leh, qiimo jaban alaabo yar yar sida qalabka garka iyo garka.
Nooc kasta oo ka mid ah qalabka wax lagu xirto ee qalabka wax lagu xirto oo garka lagu xirto oo ay ka mid yihiin qalabka Doogga ayaa ah hal nooc qalabka qalabka. Bevel Gears waxaa loo isticmaalaa codsiyada. Qalabka sidaha loo yaqaan 'spur gears' waa waxyaabaha ugu badan ee sida muuqata lagu arki karo. Garsooraha 'Helical Gears' waa nooc ka mid ah geesaha iskuullada leh oo leh raad ilkood oo la jeexjeexay. Tilmaamaha Gearbox waa gacanta qorraxda, usha wareega, usha bannaan, oo ay weheliso xawaare hoose iyo sare. shaandho gaar ah oo ku saleysan naqshaddaada iyo shuruudahaaga.
Ku saabsan alaabtayada
Xarig gareeye leh oo leh astaamaha geeraarka
Usheeda dhexe waa mid siman oo aan miridh lahayn; tayadu way fiican tahay qaabkuna wuu buuxo; nolosha xirmada u adkeysata ee usheeda dhexe marsho ayaa dheer. Qalabka ama cogwheel waa qeyb ka mid ah mashiinka wareega oo leh ilko goyn. Qalabkeedu wuxuu si toos ah u xiraa gearboxka iyo isku habeynta matoorrada.Mashiinka mootada waa isku-darka-hal-isku-darka matoor koronto iyo gear. Pinion waa qalab wareegsan. Yeelanaya labo-labo ugu shaqee si ay u gudbiyaan una wax uga beddelaan dhaq-dhaqaaqa wareegga iyo is-weydaarsiga ayaa aad ugu weyn gudbinta. Sogears waxay bixisaa xalal buuxa oo xalal qalab loogu talagalay dadka isticmaala adduunka oo dhan. Waxaan nahay hogaamiyaha horumarinta iyo soo saarida dhamaan qalabka, oo ay kujiraan qalabka softiweerka ah iyo softiweerka naqshadeynta, qalabka gawaarida gawaarida, nidaamyada cabirka, xalalka otomaatiga, qalabka laxiriira iyo qalabka geeska.
U xafiifi qaybaha qaybo sanduuqyada
Waxaan u adeegnaa dhammaan noocyada suuq geynta, laga bilaabo geesaha saxda ah ee qalabka korantada iyo codsiyada caafimaadka, illaa gawaarida iyo gawaarida xamuulka, ilaa giijinno waaweyn oo loogu talagalay marawaxadaha dabaysha iyo mashiinnada qodista.
Waxaan nahay khabiiro takhasus u leh soo saarista alaabada tikniyoolajiyada qalabka sareysa.
Sogears qaabka ganacsiga waara ayaa ku lug yeeshay xubin kasta oo ka tirsan joogitaanka Sogears ee adduunka. Waxaan qaadnaa habka ugu wax ku oolka badan ee yareynta khasaaraha iyo isticmaalka tamarta wax ku oolka ah oo ay ku jiraan naqshadeynta wax soo saarka iyo geeddi-socodka. Waxaan ka shaqeyneynaa dhammaan shaqada iyo wax soo saarka, waan xakameynaa iyaga oo sii wadnaa inaan horumarino waxtarkooda. Dhamaan tas-hiilaadka waaweyn ee caalamiga ah waa kuwo shahaado ku haysta ISO. Qalabaynta meeraha waa nidaam qalab oo ka kooban hal ama in ka badan oo dibedda ah. Fifth Gear waa taxane joornaal telefishan oo matoorro ah oo Ingiriis ah oo taxane ah.Waxaanu soo bandhignay qalab wiish tayo sare leh leh oo ku habboon dhammaan baahiyaha. Iyada oo taxane ah qalabka mashiinka wanaagsan sida qalabka mashiinka Liebherr ee Jarmalka, qalabka mashiinka EMAG ee Jarmalka, qalabka Mashiinka Japan Mitsubishi, qalabka Mashiinka Japan Mori, iyo qalabka mashiinka Japan Longze.
Aynu wada sheekaysano!
Haddii aad haysatid alaabada aad ugu jeceshahay, kaalay oo nala soo xiriir! Waxaan diyaar u nahay isla markaana sugeynaa iskaashigeenna. Waxaan u qaadanaa tayo ahaan sida faa iidadeena oo qiimaha ugu hooseeya uu yahay daacadnimo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waad nala soo xiriiri kartaa, waan ku faraxsanahay inaan ku caawino!